Archive du 08-nov-2021
Fisokafan’ny sisin-tany Maro ireo nimenomenona teny Ivato
Niverina nisokatra nanomboka tamin'ny 06 novambra ny sisin-tanin'i Madagasikara ho an'ireo sidina ara-barotra avy any Eoropa 20 volana taorian’ny fikatonana nanomboka ny 20 martsa 2020.
Mitohy ny fikatsoana
Efa mitady ho lasa fahazarana izy ity. Mitohy ny fikatsoana. Izay no azo hamehezana azy. Tsy lavitra fa dia vao tamin’ny sabotsy teo fotsiny dia efa niaraha-nahita iny ny mbola fikatsoan’ny sidina nefa hoe niandoha ny fisokafan’ny sisintany.
Ambohijatovo Nifandona ny mpivarotra hani-masaka sy polisy monisipaly
Nisy ny fifandonana teo amin'ireo polisy monisipaly eto Antananarivo sy ireo mpivarotra hani-masaka manodidina ny zaridaina Ambohijatovo omaly alahady maraina.
BNGRC Efa mivonona amin’ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra
Efa mivonona sahady amin’ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC,
Federasionin’ny Kung-Fu Wisa Manamafy ireo rafitra ny Grand Maître Avoko
Voafidin'ireo ligim-paritra rehetra manerana ny Nosy ho Filohan'ny Federasionina Malagasy amin’ny Kung-Fu Wisa ny Grand Maître Avoko ny zoma 17 septambra 2021.
Tsipy kanetibe Afrikanina Azon’ny Malagasy ny “Coupe des Nations”
Na niondrika teo anatrehan'i Burkina Faso mpampiantrano tamin’ny isa 13-10 isika Malagasy tamin’ny “partie de cadrage”, tafiditra tao anatin’ny fiadiana ny amboaran’I Afrika ho an’ny taranja tsipy kanetibe,
Tompondakan’- Afrika - Boxe Thaï Miantso tolo-tanana i Miora sy Faza
Ny 11 hatramin’ny 16 novambra izao no ho tanterahana atsy Hurgada, Egypta, ny dingana famaranan’ny tompondakan’I Afrika eo amin’ny taranja haiady Boxe Thaï.
Fatin-dehilahy tsy nisy maso sy lela Olona 4 no efa nadoboka am-ponja
Lehilahy miisa efatra no fantatra hatreto fa efa voasambotra voarohirohy tao anatin’ilay raharaha vono olona tany amin’ny faritra Menabe ka nahitana lehilahy iray efa tsy nisy maso sy lela intsony tany anaty ala.
Fiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro Nanao atrik’asa ho ana ankizy 40 isa ny Orange
Mifandraika indrindra amin’ny fivoriana iraisam-pirenena andiany faha-26 mikasika ny toetr’andro na ny « COP26 » tanterahina any Glasgow ny 1-12 novambra, nisy ny atrik’asa nomena ny anarana « Super Codeurs,
Mifoha ny tetikasa «Bioéthanol» Ny coronavirus no sakana tamin’ny 2019, hono…
Tongasoa teto an-taindrazana omaly 07 novambra maraina ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, rehefa avy nanatrika ny « COP 26 »
Fara Gloum, Rija Perc, Desp Nitondra mozika akostika tao Anat-Saha
« Tendry sy kalo rotsirotsy », izay indray no lohateny nampitondrana ny fiarahana tamin’ireo mpanakanto havanana amin’ny vazo akostika nahitana an-dry Fara Gloum,
Isotry sy ny manodidina Mpanendaka 5 lahy indray tratra
Lehilahy miisa dimy no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny boriborintany fahatelo Antaninandro sy fahaefatra etsy isotry ny 06 novambra teo tokony ho tamin’ny 03ora tolakandro rehefa avy nanendaka.
Lalao olaimpika 2024 Manomana ny Barea U20-23 ny UNIFICASM
Nanamafy ny fandraisana an-tànana ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra sokajy U20 sy U23 ny UNIFICASM (Union des Footballeurs Internationaux et Cadres Sportifs Malagasy),
Fitantanana ny firenena Maro ireo manampahefana tia manasongadin-tena
Henjana amin’ny fampalazana tena sy ny kisarisary ivelany ny mpitondra sy ny manampahefana Malagasy.
Lalaon’ny mpiasam-panjakana Tompondaka tamin’ny basikety ny Jirama
Voahosotra ho tompon-dakan'ny "Basket-ball" nandritra ny lalao famaranana omaly maraina ny ekipan'ny Jirama ho an’ny fifaninana ao anatin’ny ASIEF (Association Sportive Interminisiterielle pour l’Entretien des Fonctionnaires)
Bongolava Naolan’ilay rangahy ny zafikeliny 9 taona
Lehilahy lehibe 62 taona no tratra nanolana zaza 09 taona tany Bongolava ny 22 oktobra lasa teo. Taitra ny renim-pianakaviana iray rehefa nahare ny tarainan’ny zanany fa maharary azy ny fivaviany.
Araben’Antananarivo Mampirisika ny olona hiasa ilay rahozatra
Andro maromaro izay dia tsikaritra ho nisy lehilahy iray tombanana ho afrikanina izay goavam-be mampidera hozatra eny an-dalana saika mitety toerana maro eto Antananarivo.
Taolagnaro sy Sambava Tonga ny vary mora 860 taonina
Manamafy ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana fa tsy ampy ny tolotra manoloana ny tinady ara-bary
Maevatanana Mpiasan’ny fahasalamana roa lasibatry ny fanafihana
Mpiasan’ny fahasalamana miisa roa izay "Anesthesiste" mivady izay miasa ao amin'ny CHRR Maevatanana no nisy nanafika ny alin’ny sabotsy 06 novambra teo tokony ho tamin'ny 08 ora rehefa hody hisakafo fa “garde” ny lehilahy.
Randrana sendikaly – USAM – SVS “Tokony soniavina ny fifanarahana C 176 …”
Misy ny naoty navoakan’ny tale jeneraly misahana ny asa mikasika ny fanitarana ny fifidianana delegen’ny mpiasa, hoy ny fampahatsiahivana avy eo anivon’ny Randrana sendikaly-USAM-SVS omaly,